चाडबाडको मौका छोपेर खाद्य पदार्थमा मिसावट
बुटवल १ कार्तिक ।
सोमबार सोमबारे बजारबाट ताजा भनेर परबल किनेकी बुटवलको दीपनगकी सीता पराजुलीले परबल भिजाउदा बित्तिकै हरियो रड. निस्कीयो । संगै बजार गरेकी अर्की साथीलाई सोध्नुभयो । उहाको पनि त्यस्तै भयो ।
बुधबार दिपनगरकै राधिका थापाले खसीको मासु किन्नुभयो । प्रेसर कुकरमा ७ सिठी लगाउदा पनि मासु पाकेन । बुधबार मिलनचौककी शान्ता खत्रीले बजारबाट २ किलो दाल ल्याउनु भयो । दाल धुदा कालै रंग निस्केपछि उहा खान डराउनुभयो । मिलनचौककै पार्वती थापाले एक चिया चम्चा बेसार राख्दा पनि तीन जनालाई पकाएको तरकारी पहेलो भएन । अर्को एक चम्चा थप्नु भयो । तरकारी बाक्लो भयो तर पहेलो रड. राम्ररी अझै आएन ।
चाडबाड सुरु भएसगै बुटवल बजारमा दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुमा हुने मिसावट बढेको छ । रोजेको सामान खोजेजस्तो नपाउदा सीता, राधिका, शान्ता र पार्वती जस्तै बुटवलका धेरै गृहिणी अहिले समस्यामा छन् । भान्सामा नभै नहुने दाल, चामल, तरकारी, बेसार, मासु, घीउ, तेल लगायतका वस्तुमै भएको मिसावटले उपभोक्ताहरु हैरान भएका छन् । नियमीत अनुगमन र कारबाहीको अभावमा खाद्यवस्तुमा मिसावट बढेकोे हो । स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका वस्तु मात्र होइनन् अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट भित्र्याइएका खाद्यपदार्थमा समेत अहिले मिसावट छ । ‘दसै सुरु भएपछि अखाद्य पदार्थ र रङ्ग मिसाइएका खाद्यवस्तु बढी भेटिएका छन् ।’ बुटवल मीलनचोकका उपभोक्ता गणेश रानाले भन्नुभयो ‘ देख्दा उस्तै देखिने तर झक्काउने खालका वस्तु बजारमा बढी आएका छन् ।
मिसावटयुक्त खाद्यपदार्थले उपभोक्ता मात्र होइन व्यवसायी समेत आजीत छन् । मिसावटयुक्त खाद्यवस्तुले ग्राहकहरुमा असन्तुष्टि बढेको छ । यसबाट नियमीत ग्राहकहरु भड्कीएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘नीकै मिसावट भएको उपभोग्य वस्तु बजारमा आएको छ ।’ बुटवलका खाद्य व्यवसायी मोहन शर्मा भन्नुहुन्छ ‘यसले असल व्यवसायीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । आफैलाई मिसावटको आरोप लाग्न थालेको छ ।’ दाल, चामल,घीउ, तेल, मह,चिनी, बेसार, खुर्सानी, मसला तयारी खाजा लगायतका वस्तुमा बढी मिसावट भेटिएको उहाले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रुपन्देही अध्यक्ष नर्बु लामाले सिमा क्षेत्रमा अनुगमन र कारबाही नहुदा भारतीय बजारबाट धेरै मिसावटयुक्त खाद्यवस्तु भित्रेको बताउनुभयो । उहाका अनुसार भैरहवामा रहेको क्वारेन्टाइनले चेकजाच नगरी सामान पठाउदा भारतीय बजारबाट कार्बाइड राखेर पकाएका केरा बढी भित्रेका छन् । चिल्लो देखाउन मेटासिडको झोलमा डुबाएका टमाटर आएका छन् । भन्सारको असावधानीले मेकामाइन ‘बी’ मिसाएर चिल्लो र कालो पारिएको मासको दाल धेरै आएको छ । मालाचाइट ग्रिन नामक रसायन मिसाएर हरियो बनाएका परवल र केराउ पनि बजारमा धेरै भित्रेका छन् । खुर्सानीको धूलो र मसलाको धूलोमा काठको धूलो, मरिचमा मेवाको दाना र बेसारमा पिठो मिसीएका छन् । मिसावट भएका खाद्यवस्तु पनि बाहिरबाट उस्तै देखीने भएकाले कतिपयमा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै ठगीएका छन् ।
पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा खाद्य गुणस्तर निरीक्षणको जिम्मा पाएको क्षेत्रीय खाद्य प्रविधी गुण नियन्त्रण कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार स्थानीय उत्पादनदेखि ब्राण्ड स्पष्ट नभएका तथा भारतबाट लुकिछिपी ल्याउने उपभोग्य वस्तुमा बढी समस्या देखिने गरेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख देवप्रसाद पाण्डेले गुनासो उजुरी गरेका स्थानमा कर्मचारी पठाएर शील गर्नेदेखि कारबाही प्रक्रिया गर्ने बताउनुभयो । उहाका भनाइमा आवश्यक खाद्य निरीक्षक नहुदा बजार अनुगमन, खाद्य पदार्थको परिक्षण र निरीक्षणमा समस्या छ । कार्यालयमै आएका गुनासा पनि छिटोछरितो हेर्न सकेको छैन र धेरैजसोमा उपभोक्ताले उजुरी नगर्ने उपभोक्ताले उजुरी गरेकोमा प्रसाशनले सहयोग नगर्ने समस्या रहेको उहाले बताउनुभयो ।
उजुरीका आधारमा परीक्षण गरीसकेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले त्यसको अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने काममा तदारुकता नदेखाउदा पनि मिसावट समस्या बढेको छ । उसो त खाद्य ऐन अनुसार जिल्ला अनुगमन समितिले मात्र हैन नगरपालिका भित्र नगरपालिकाले समेत बजार अनुगमन गरेर खाद्य परीक्षण गर्नुपर्ने नियम छ । त्यो पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।उपभोक्ताहीत संरक्षण मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष नर्बु लामाले अखाद्य वस्तु विष सरह हानीकारक हुने भएपनि अनुगमनको अभावमा बुटवल र आसपासको क्षेत्रमा खाद्यवस्तुमा अखाद्य वस्तु प्रयोग बढ्दै गएको बताउंनु हुन्छ् ।
उसो त, जिल्ला अनुगमन समितिले दसैको सन्दर्भ पारेर एक एक दिन बुटवल र भैरहवा बजारमा अनुगमन गरेका थिए । व्यवसायीलाई थाहा दिएर गरिएको उक्त अनुगमन झारा टार्न मात्रै गरिएको उपभोक्ताहरुको आरोप छ । ‘चाडबाडको मेसो सुरु भयो कि बजारमा मिसावट र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण बढ्छ । अवैध व्यापार मौलाउछ ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो ‘सरोकारवालकाको झारा टार्ने कामले उपभोक्ताहरु हैरान छन् ।’